'Indlela akhule ngayo uWinnie iyona eyamenza wangaba wuvumazonke' | News24
'Indlela akhule ngayo uWinnie iyona eyamenza wangaba wuvumazonke'
eThekwini - UMengameli wakuleli uMnu Cyril Ramaphosa ukubeke kwacaca ukuthi indlela akhule ngayo nomlando wakhe wezepolitiki uWinnie Madikizela Mandela yiyona eyamenza angavumi ukuvunyiswa noma yini futhi angawuboni umehluko phakathi kwabantu besilisa nabesifazane, ethatha ngokuthi kuyalingwana nje.
UMnu Ramaphosa ukusho lokhu emuva kokuhambela ikhaya likaWinnie eMbhongweni eMbizana esifundazweni sase-Eastern Cape ngaphambili kokuhambela i-Rally yesikhumbuzo ngale ngqalabutho esanda kudlula emhlabeni emuva kokugula isikhathi eside.
Le rally ibithanyelwe abantu abangaphezulu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili iqhubeke enkundleni yezemidlalo eyaqanjwa ngongasekho we-ANC uMnu Mphuthumi Mafumbatha.
Iningi losopolotiki ababeyihambele bakhulume bababaza ubuqotho bakhe uWinnie nokuthi ubengathathi noma yini njengoba nasekhaya lakhe ubethathwa njengo nsika.
Ethula inkulumo yakhe umengameli uRamaphosa uthe indawo lapho kwazalelwa khona uWinnie yakhula abantu bayo beziphilela ayifani nezinye izindawo lapho kwafika amakoloniyali ahwebelane nabantu.
OLUNYE UDABA:Ukubuya kukaWinnie Madikizela-Mandela emshadweni kwasisiza kakhulu - Umndeni
Uthe uWinnie akazange aqanjwe njengo mama wesizwe ngoba kwakumnandi ukumqamba kodwa izindlela ezinzima azihambile esikhathini sobunzima sobandlululo ekubalwa kuzo ukuhlukunyezwa amabhunu obandlululo nokuhlukaniswa nomndeni, nekuthe elakuleli selibusa ngentando yeningi kodwa walokhu eqhubekile esho ethi umzabalazo uyaqhubeka.
UMnu Ramaphosa ufanise uWinnie njenge sosha ebelivuka lizithathe lingavumi noma yini ngoba ivunywe ngabanye kodwa ubeyimela into yakhe kangangoba usebenzisane kakhulu nophiko lwentsha kuleli ngoba wayefuna ukuqondisa izinto ezazingenzeki kahle ngaphakathi enhlanganweni kaKhongolose.
“Wayephambili ukulwela ukulingana kwabesilisa nabesifazane, walwela namalungelo entsha. Yingakho ngithi kuni niyintsha yabesifazane nabesilisa nani vukani nithathe lapho ashiye khona umama wesizwe” kusho uRamaphosa. Umchaze uWinnie njengomuntu obengayifuni inkohlakalo nokukhwabanisa.
Umcimbi wokumkhumbula usazoqhubeka nakusasa esontweni ashadela kulo noMadiba esigidini saseLudeke lapho kulindelwe nabaculi bomculo wokholo abazonandisa.